Vovonitra biodegradable, Bowl, Cup - ZHONGSHENG
ZZ Eco Products 5-Compartments atoandro atoandro 12.5 ″ ...
ZZ Eco Products Sugarcane Bagasse kafe kaopy ...
Jinhua zhongsheng Fiber Products Co., Ltd dia orinasa mpamokatra izay mampiditra ny fitaovana vita amin'ny milina fanamboarana taratasy sy famolavolana sy famolavolana ary mamolavola ho iray manontolo. Ny famolavolana vita amin'ny taratasy & lasanty mafana fikosoham-borona izay ataonay dia mety amin'ny karazan-javakanto sy milina samihafa amin'ny fomba famonoana (fametrahana herinaratra, famonoana setroka, famindrana menaka hafanana). Izahay dia mitarika amin'ny fikarohana sy ny famokarana lasantsy vita amin'ny papelika nohafanaina amin'ny gony sy menaka fandefasana hafanana. Ity teknolojia mpamonjy angovo ity dia nampiroborobo be sy nampiasaina an-trano sy any ivelany.
Zhongsheng Group dia naorina tamin'ny 2004. Tamin'ny voalohany, Zhongsheng dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana, fampivoarana, fanamboarana ary famarotana ny fitaovana vita amin'ny fantsom-paosy sy bobongolo manokana, ary nibodo ny tsenan-tsolika vita amin'ny famononam-bokatra ny China 70% ary ny teknolojia amin'ny alàlan'ny famolavolana vita amin'ny aluminium, otomatis milina sy milina lehibe.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahan'ny tsenan'ny takelaka vita amin'ny biodegradable, napetraka tamin'ny taona 2013 i Jinhua Zhongsheng Fiber Products Co., Ltd ary nanomboka niditra tamin'ny famolavolana an-tsolika vita amin'ny kitapom-bolan'ny biodegradable.
Famoronana sakafo antoandro azo ampiasaina ...
Na dia efa naharitra folo taona aza ny baiko famerana plastika, ary firenena maro sy olona te-hanao tontolo iainana tsy haloto maloto amin'ny plastika, saingy mbola afaka mahita maro ny vokatra plastika azo disoina. Nahazo tsikeraina ny fahasimbana amin'ny takelaka vita amin'ny plastika azo ampiasaina, samy hafa ihany izy ireo ...